China kaviri mutsara bhora saizi slewing inotakura isina giya 020.25.500 fekitori uye vagadziri | Wanda
Slewing kubereka imhando yakakura yekutakura iyo inogona kutakura yakazara mutoro. Inogona kutakura hombe axial, radial mutoro uye kupidigura nguva panguva imwe chete. Kazhinji, slewing kubereka iri vakapakata hunowedzera buri, zvemukati kana zvekunze giya, lubricating mafuta gomba uye rakavhara mudziyo, izvo zvinoita magadzirirwo huru injini chiine, nyore kutungamira uye nyore kuchengeta. Pane mana akateedzana ekushambadzira anotakura: isina meno, ekunze uye epakati mana poindi yekubata bhora kutakura, kaviri mutsara angular kuonana bhora kutakura, muchinjikwa cylindrical roller inotakura, muchinjikwa tapered roller inotakura uye matatu mutsara cylindrical roller inoumba inobereka. Pakati pavo, ina poindi yekuonana bhora inotakura ine yakakwira isingachinjiki mutoro inokwana, muchinjikwa cylindrical chinotenderera ine yakakwira inesimba mutoro inokwana, uye muchinjikwa tapered roller inotakura ine yakakwira pre pre mutoro kugona Kupindirana kunogona kuita kuti kubara kuve nekutsigira kukuru kusagadzikana uye kutenderera kunyatso. Nekuda kwekuwedzera kwekutakura huremu, iwo matatu mitsara cylindrical roller yakasanganiswa inobereka inotungamira kune yakatakura kukwirira, uye akasiyana masimba anotakurwa nemhando dzakasiyana dzemigwagwa zvichiteerana. Naizvozvo, iyo dhayamita yekutakura inogona kuderedzwa zvakanyanya pasi pekunetseka kumwechete, saka mainjini iri yakawanda compact. Icho chinotakura chinotakura chine hurefu hwekutakura. Slewing kubereka zvinowanzoshandiswa pamwero mukuru-slewing mudziyo wekusimudza michina, mechina michini, yekuvaka michina, chiteshi michini, ngarava michini, yakakwira-chaiyo radar michina uye chombo chinokanganisa. Panguva imwecheteyo, isu tinogona zvakare kugadzira, kukudziridza uye kuburitsa ese marudzi eakasarudzika mamiriro slewing akatakura zvinoenderana nezvinodiwa zvevashandisi. Basic chivakwa slewing kubereka.
Iyo mbiri volleyball mhando turntable inobereka ine matatu marudzi. Iyo simbi bhora uye yekuzviparadzanisa block inogona kuburitswa yakananga kune yekumusoro uye yakadzika mijaho. Mitsara miviri yesimbi mabhora ane madhaimita akasiyana akarongedzwa zvinoenderana nemamiriro ekushushikana. Iyi mhando yegungano rakavhurika iri nyore kwazvo. Iwo maAngles anotakura ekumusoro uye ezasi arc mijaho ari 90 ° uye inogona kutakura rakakura axial simba uye kupidigura nguva. Kana iyo radial simba iri rakakura kupfuura 0.1 nguva yeaxial simba, iyo nzira yemigwagwa inofanira kuve yakanyatsogadzirwa. Iyo axial uye radial saizi yeakaviri mitsara idenderedzwa slewing inobereka ine akasiyana madimeter ari akakura uye chimiro chakasimba. Inonyanya kukodzera kushongwe crane, rori crane uye kumwe kurodha uye kudzikisa michina ine yepakati kana yepamusoro dhayamita.
Kune akawanda mafomu ekutakura akasimudza, asi chimiro chavo chakangofanana. Mhete yekunze (ine mazino kana isina meno),. Simbiso bhandi,. Rolling element (bhora kana roller), mafuta kamwene, plug, plug pini, yemukati mhete (ine toothed kana isina meno), spacer kana keji, inokwira gomba (yakasungwa kana yakatsetseka).
Zvinoenderana nemhando dzakasiyana dzemhando, mabheyibhendi anokwanisa kuganhurwa kuita ina mapoinzi bhora turntable mabheyaringi, muchinjikwa cylindrical (tapered) roller turntable mabheya, kaviri mutsara mana poindi bhora turntable mabheyaringi, mitsara miviri yakaderedzwa dhayamita idenderedzwa yakaturika mabheyari, bhora rinotenderera musanganiswa uye mitsara mitatu ye cylindrical roller yakasanganiswa turntable bearings. Aya mabheyari ari pamusoro akapatsanurwa kuita asina mazino zvichienderana nekuti akaiswa mazino here kana kuti kwete uye kugoverwa kwemazino Kune akasiyana maumbirwo, senge mhando, rekunze zino mhando kana yemukati zino mhando.
Zvinoenderana neakasiyana masisitimu ehunhu anotakurika, inogona kusangana nezvinodiwa zvekushandira mushanyi pasi pemamiriro ezvinhu akasiyana. Pakati pavo, ina poindi yekubata bhora slewing inotakura ine yakakwira inesimba mutoro inokwana, muchinjikwa cylindrical chinotenderera slewing kutakura ine yakakwira static mutoro huremu, matatu mutsara cylindrical roller yakasanganiswa turntable inobereka inogona kutungamira iko kuwedzera kwekutakura kugona kune iyo yekukwirira kureba kutungamira, uye mitoro dzakasiyana siyana Inotakurwa nemakwikwi akasarudzika uye mapoka e roller, saka hupamhi hwenzvimbo yakaderedzwa zvakanyanya pasi pechinhu chimwe chekushushikana, Iine hunhu hwekuita kuti mainjini iwedzere kuumbika, ihwo huremu hwakatakura huremu hunobata hutakura.
Slewing kubereka imhando yakakura yekutakura iyo inogona kutakura yakazara mutoro. Inogona kutakura hombe axial, radial mutoro uye kupidigura nguva panguva imwe chete. Kazhinji, slewing kubereka iri vakapakata hunowedzera buri, zvemukati kana zvekunze giya, lubricating mafuta gomba uye rakavhara mudziyo, izvo zvinoita magadzirirwo huru injini chiine, nyore kutungamira uye nyore kuchengeta. Pane mana akateedzana ekushambadzira anotakura: isina meno, ekunze uye epakati mana poindi yekubata bhora kutakura, kaviri mutsara angular kuonana bhora kutakura, muchinjikwa cylindrical roller inotakura, muchinjikwa tapered roller inotakura uye matatu mutsara cylindrical roller inoumba inobereka. Pakati pavo, ina poindi yekuonana bhora inotakura ine yakakwira isingachinjiki mutoro inokwana, muchinjikwa cylindrical chinotenderera ine yakakwira inesimba mutoro inokwana, uye muchinjikwa tapered roller inotakura ine yakakwira pre pre mutoro kugona Kupindirana kunogona kuita kuti kubara kuve nekutsigira kukuru kusagadzikana uye kutenderera kunyatso. Nekuda kwekuwedzera kwekutakura huremu, iwo matatu mitsara cylindrical roller yakasanganiswa inobereka inotungamira kune yakatakura kukwirira, uye akasiyana masimba anotakurwa nemhando dzakasiyana dzemigwagwa zvichiteerana. Naizvozvo, iyo dhayamita yekutakura inogona kuderedzwa zvakanyanya pasi pekunetseka kumwechete, saka mainjini iri yakawanda compact. Icho chinotakura chinotakura chine hurefu hwekutakura. Slewing kubereka zvinowanzoshandiswa pamwero mukuru-slewing mudziyo wekusimudza michina, mechina michini, yekuvaka michina, chiteshi michini, ngarava michini, yakakwira-chaiyo radar michina uye chombo chinokanganisa. Panguva imwecheteyo, isu tinogona zvakare kugadzira, kukudziridza uye kuburitsa ese marudzi eakasarudzika mamiriro slewing akatakura zvinoenderana nezvinodiwa zvevashandisi.
Pashure: Yemukati giya rakapetwa kaviri bhora dhayamita slewing inotakura 023.40.1250
Zvadaro: Nhatu mutsara roller turntable slewing inotakura zvekunze giya 131.32.800
Crane Slewing Kubereka
Kunze Mazino Kusvetuka Kubereka
Yakasarudzika OEM Roller Slewing Kupa yakashandiswa ...